Ihotele iPousada Casa Branca - I-Airbnb
Ihotele iPousada Casa Branca
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguLuciane
Isanda kuvulwa, iHotele iPousada Casa Branca inayo yonke into yokwenza ukuhlala kwakho eUruguaiana kube mnandi.
Onke amagumbi okulala aneefestile eziya egadini, iibhedi ezitofotofo zebhokisi, iTV yescreen esisicaba esineCable TV kunye neNet Flix, umoya opholileyo, amagumbi okuhlambela amakhulu kunye nebhentshi yokusebenza ene-intanethi ye-WiFi.
Isidlo sakusasa sinikwa iimveliso zemveli kunye neziqholo ezivela kummandla wethu.
Inkonzo yokudlulisa kwisikhululo seenqwelomoya nakwisikhululo sebhasi.
Ihotele iPousada Casa Branca yazalwa ngenxa yamava ezinye iinkampani zokulala kwiBarlos Hotéis e Pousadas Group kunye nencasa yokwamkela iindwendwe eUruguaiana entle.
Kanye kunye nenkonzo enikezelwa ngabanini, iimpawu zenkonzo yomntu zidibene, eziza kwenza ukuba ukuhlala kwakho kungalibaleki.
Konwabele ukuhamba ngeendlela ezithandekayo kwizitrato ezibanzi zase-Uruguaiana kunye neendlela zokuhamba.
Ukuba uyafuna, ukhenketho lunokuba ngebhayisekile, Ihotele iPousada Casa Branca ibonelela ngeebhayisekile kwaye sinomjikelo ozolileyo kwaye omnandi phambi kokusekwa.
Thatha ithuba lokuhlala kwakho ukuze undwendwele iiVenkile zethu zasimahla eUruguaiana kunye nezemveli ezikwiUruguay ekufutshane.
Ungalibali ukuthenga, ngamaxabiso amangalisayo, iiwayini eziveliswe zezona mizi wayini zibalaseleyo eArgentina, kwisixeko esisebumelwaneni iPaso de Los Libres, iqaqambisa eyona wayini ilungileyo yeMalbec, Caberbet Sauvignon kunye neMerlot.
Thatha ithuba lokubukela umboniso eTeatro Rosalina Pandolfo Lisboa, ekwimitha engama-200 ukusuka kwiHotele, okanye umboniso bhanyabhanya osanda kuvulwa iCine Prime.
Ime kumbindi wesixeko sase-Uruguaiana, kwindlela yayo ephambili.
Kwiimitha ezimbalwa kude uya kufumana iindawo zokutyela eziphambili e-Uruguaiana, urhwebo oluguquguqukayo nolwahlukileyo.
Ungandwendwela iiVenkile zamahala ezisanda kuvulwa ezingaphantsi kweemitha ezingama-200 ukusuka eHotele.
Umgama ozimitha ezili-100 yiPraça Barão do Rio Branco kwaye ikufutshane neemyuziyam eziphambili esixekweni. IMyuziyam yaseCriolo, ekwiZiko leNkcubeko kunye neMyuziyam yaseRaul Pont, egcina imbali yommandla wethu iphila.
Awona maqumrhu oluntu angundoqo nawo akumanyathelo nje ukusuka kwiHotele iPousada Casa Branca kunye neCathedral emangalisayo yaseSant'ana.
Ihotele iPousada Casa Branca imi kumbindi we Uruguaiana, iimitha ezimbalwa ukusuka ePraça Barão do Rio Branco kwaye ibekwe kwi Avenida Presidente Vargas. Indawo ezolileyo, ekhuselekileyo enorhwebo kunye nemibutho yoluntu ebekwe kuyo.